ပင်မစာမျက်နှာ ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်ညသန်းခေါင်ယံရွေးချယ်မှုများတွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအရာများ
by Waylon ဂျော်ဒန် ဇန်နဝါရီလ 23, 2021
ကရေးသား Waylon ဂျော်ဒန် ဇန်နဝါရီလ 23, 2021
Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သည်အလျင်အမြန်ချဉ်းကပ်နေပြီ။ ဒီနှစ်ရဲ့အဓိက virtual ပွဲတော်ဟာ ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈ ရက်မှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့လိုပဲ Midnight အမျိုးအစားရွေးချယ်မှုအပါအ ၀ င်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားများရှိသည်။
“ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာနှင့်ဟာသဇာတ်လမ်းမှသည်အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကိုငြင်းပယ်သည့်အကျင့်များသို့” Sundance ဝက်ဘ်ဆိုက် ပြည်နယ်များ။ ဒီရုပ်ရှင်တွေကသင့်ကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိနေစေမှာပါ။
၎င်းသည်ယခင်နှစ်များကရွေးချယ်ခဲ့သောပါ ၀ င်သောပရိသတ်များနှင့်အမြဲတမ်းဆင်တူသောအမျိုးအစားဖြစ်သည် မျိုးရိုးလိုက်, အဆိုပါ Babadookနှင့် လုပ်ကြံခံရလူမျိုးနှင့်ဤနှစ်တွင်အဘယ်သူမျှမခြွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါရုပ်ရှင်ကားစာရင်းအားလုံးကိုကြည့်ရှုပြီးပွဲတော်စတင်နေစဉ် iHorror မှထုတ်လွှင့်မည့်သတင်းများကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
ဆင်ဆာလူကြီး (Prano Bailey-Bond ဒါရိုက်တာ)
Niamh Algar သည် ၁၉၈၅ တွင်“ ဗီဒီယိုမကောင်းသော” ခေတ်တွင်သတ်မှတ်သည်။ဝံပုလွေတွေဟာအားဖြင့်ကြီးပြင်းလာ) သူမ၏အလုပ်ကိုအလေးအနက်ထားသောရုပ်ရှင်ဆင်ဆာအဖြစ် Enid အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည်။ သူမ၏ညီမကွယ်ပျောက်သွားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်ပတ်သက်သောမြူဆိုင်းဖွယ်အမှတ်တရများနှင့်ဆင်တူဟန်တူသောရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်သူမအနေဖြင့်အချက်အလက်များနှင့်စိတ်ကူးယဉ်တို့အကြားတဖြည်းဖြည်းမှုန်ဝါးသွားစေသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထိုရုပ်ရှင်သည်ဝလေဒါရိုက်တာ Prano Bailey-Bond ၏ပွဲ ဦး ထွက်ဖြစ်သည်။ ဒါရိုက်တာအန်တိုနီဖလက်ချာနှင့်အတူဇာတ်ညွှန်းကိုပူးတွဲရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့ကယခင်ကအပါအဝင်အများအပြားတိုတောင်းသောရုပ်ရှင်များတွင်ပူးပေါင်းခဲ့သည် က Man vs. သဲ နှင့် စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သော.
အမှောင်ထဲမှာနေအိမ်လာမယ့် (James Ashcroft မှရိုက်ကူးသည်)
အလန်နှင့်ဂျေးလ်တို့သည်သူတို့၏သားများကိုနယူးဇီလန်တောကန္တာရမှတစ်ဆင့်အလိုအလျောက်တိုးမြှင့်သွားရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါသူတို့စတင်လှုပ်ရှားမည့်ကြောက်မက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်များကိုစိတ်ကူးမရှိပါ။ မိသားစုပျော်ပွဲစားဝင်ရန်ရပ်လိုက်သောအခါတောထဲမှနဂါးနှစ်ကောင်ထွက်လာသည့်အခါမကြာမီသူတို့သည်အကျဉ်းသားများနှင့်ဖမ်းဆီးခံရခြင်းနှင့်တိတ်ဆိတ်စွာမနေနိုင်တော့သောအတိတ်၏သရဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ဒီရုပ်ရှင်ဟာအစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဂရုစိုက်မှုသတိပေးချက်ပါရှိပါတယ်။
ဒါရိုက်တာဂျိမ်းအက်ရှာကော့ဖ်သည်သူ၏အင်္ဂါရပ်ကိုဒါရိုက်တာအဖြစ်စတင်ခဲ့သည် အမှောင်ထဲမှာနေအိမ်လာမယ့်။ သူသည်ယခင်ကဌာနေ Maori ပြဇာတ်ရုံကုမ္ပဏီ Taki Rua ၏အနုပညာဒါရိုက်တာအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါ Matrix အတွက်တစ် ဦး Glitch (ရော့ဒ်နီအက်ရှာကရိုက်ကူးသည်)
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရော့ဒ်နီအက်ရှာသည် Sundance သို့သူ၏ရုပ်ရှင်အသစ်နှင့်အတူပြန်လာသည်။ အဆိုပါ Matrix အတွက်တစ် ဦး Glitchကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောကမ္ဘာသည်လုံးဝတကယ့်အစစ်အမှန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားသည့်ခြင်း simulation သီအိုရီ၏အတွေးအခေါ်များကိုနက်ရှိုင်းစွာငုပ်ခြင်း Ascher သည်သီအိုရီကိုရှေးခေတ်ဂရိများမှ Philip K. Dick နှင့် Wachowskis တို့၏ခေတ်သစ် iterations သို့ခြေရာခံသည်။အဆိုပါ Matrix) အဖြစ်ခေတ်သစ်ပညာရှင်များ။
Ascher သည်ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်များအတွင်းစိတ် ၀ င်စားဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်တစ်ခါတစ်ရံကြောက်စရာကောင်းသောမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်အချို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည် ROOM တွင် 237 နှင့် အိပ်မက်ဆိုး။ အိပ်ရေးမ ၀ င်တာကိုခံစားနေရတဲ့သူတွေရဲ့ဘ ၀ အတွေ့အကြုံတွေကိုနက်ရှိုင်းစွာငုပ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်သူကအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်။
ခေါက် (ဒါရိုက်တာ Frida Kempff)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနမှပြန်လွတ်လာပြီးနောက် Molly သည်သူမဘဝသစ်သို့ပြောင်းလဲနေဆဲဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမ၏တိုက်ခန်းအသစ်တွင်အစပိုင်းတွင်နှစ်သိမ့်မှုအနည်းငယ်တွေ့သော်လည်းသူမမျက်နှာကြက်ပေါ်တွင်ထူးဆန်းသောခေါက်သံကိုကြားရသောအခါကြာမြင့်စွာခံစားရသည်မဟုတ်ပါ။ ဒီအသံဟာဘာလဲဆိုတာသူသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အခါသူမဘာမှမကြားဘူးလို့အိမ်နီးချင်းတွေကထုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ အသံတွေတိုးများလာပြီးမကြာခင် Molly ကသူမအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့အော်ဟစ်သံကိုကြားလိုက်ရသည်။ သူမကဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှာရမယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လို?
ဒါရိုက်တာ Frida Kempff သည်ဤစိတ်သောကရောက်နေသည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ၌ gaslighting ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စိတ်ရောဂါနှင့်ပတ်သတ်သောလူမှုရေးအခြေအနေကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ Sundance ချဉ်းကပ်သကဲ့သို့အရာ Buzz တွေအများကြီးရရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။
အမေ Schmuckers (Harpo နှင့် Lenny Guit မှရိုက်ကူးသည်)
Issachar နှင့် Zabulon တို့သည်နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသောအစ်ကိုနှစ် ဦး ဖြစ်ပြီးမိခင်၏ nippy ခွေးပျောက်ဆုံးပြီးသည့်နောက်တွင်သူတို့အနေနှင့်ကြုံတွေ့ရသည်။ ထိုအမျိုးသမီးသည်သူတို့ကိုအိမ်မှထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးဘရပ်ဆဲလ်မြို့ပြတောတွင်းမှတစ်ဆင့်သူတို့ကိုခွေးရှာတွေ့သည့်အထိပြန်မသွားရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။
ရုပ်ရှင်တွင်“ တိရိစ္ဆာန်အလွဲသုံးစားမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အခြားကြည့်ရှုသူများကိုစော်ကားသောအခြားအကြောင်းအရာများအတွက်ပုံဖော်ထားသည့်အကြောင်းအရာများအတွက်ပါဝင်သည့်သတိပေးချက်ပါရှိသည်။ အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ပရိသတ်များအတွက်မသင့်တော်ပါ
ခြိုးဖောကျ (Dusty Mancinelli နှင့် Madeline Sims-Fewer မှဒါရိုက်တာ)
ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးမျှော်လင့်ချက်ဖြင့်တနင်္ဂနွေအပန်းဖြေခရီးထွက်ရန် Miriam နှင့်ကာလက်တို့လက်ထပ်လိုက်ခြင်းကယခင်မထင်မှတ်သောအစ်မ Greta နှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း Dylan တို့နှင့်အတူလက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူ Greta နှင့်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ရန်ကြိုးစားပြီးနောက်ရှုံးနိမ့်ပုံရပြီး Miriam သည် Dylan သို့ဆွဲဆောင်ခံရသည်။ အကြမ်းဖက်မှုကိုကျူးလွန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုပြုပြီးနောက်တနင်္ဂနွေနေ့သည်ပြိုကွဲသွားပြီးမကြာမီ Miriam သည်အပြစ်ပေးရန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။
Madeline Sims-Fewer နှင့် Dusty Mancinelli တို့သည် ၂၀၁၅ တိုရွန်တိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ပွဲတော် Talent Lab တွင်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမကြာမီအတူတကွရေးသားခြင်းနှင့်ရေးသားခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကသူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးဇာတ်ကားရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ Sims-Fewer သည်လည်း Miriam အဖြစ်သရုပ်ဆောင်သည် ခြိုးဖောကျ.
အဆိုပါ Matrix အတွက်တစ် ဦး Glitchဆင်ဆာလူကြီးအမှောင်ထဲမှာနေအိမ်လာမယ့်ခေါက်အမေ SchmuckersSundance 2021Sundance ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ခြိုးဖောကျWaylon ဂျော်ဒန်
'Wrong Turn' (၂၀၂၁) ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် - Gory ကိုယုံမှားသံသယဖြစ်စေသည်
'Ghostbusters: Afterlife' က Chubby၊